Akụkọ - Nkwupụta ezumike ọhụrụ nke afọ ọhụrụ
Bike okporo ụzọ
Electric ịkpakọba Bike
Electric Abụba Bike
Ụgbọala eletrik eletrik
Nkwupụta ezumike ọhụrụ nke afọ ọhụrụ
Febụwarị 12 bụ afọ ọhụrụ ndị China, ụlọ ọrụ anyị ga -enwe ezumike otu ọnwa, n'oge a na -agaghị ahazi mmepụta ya. Ya mere, a ga -agbatị oge nnyefe ya. Biko hazie oge ịzụrụ ihe n'ụzọ ezi uche dị na ya iji zere nsogbu ọ bụla enweghị ike ịchịkwa.
Dị ka ahụmịhe nke afọ ndị gara aga, ọnụ ahịa akụrụngwa ga -ebili mgbe afọ ọhụrụ nke China gachara. Mana afọ a, ma e jiri ya tụnyere afọ ndị gara aga, ịrị elu ọnụahịa nke akụrụngwa amalitela na mbido Disemba. Na etiti ahụ adịghị mfe ịzụrụ, ihe dịka afọ a igwe kwụ otu ebe ugwu, oge nnyefe ga -adị ogologo na ogologo. Ya mere, a na -atụ aro na ndị ahịa nwere mkpa ịzụrụ ihe ga -etinyerịrị iwu ozugbo enwere ike. Gbalịsie ike maka nnyefe mbụ yana ọnụ ala.
N’afọ 2021, mmụba ọnụahịa na ịgbatị oge nnyefe nke igwe eletrik bụ ihe a na -apụghị izere ezere, mana biko nwee obi ike na anyị agaghị ebelata ogo ngwaahịa anyị site na izere ịrị elu ọnụahịa. Ogo ngwaahịa mgbe niile bụ ọnọdụ dị mkpa maka nlanarị nke ụlọ ọrụ anyị, ọ nweghị ihe kpatara anyị ga -eji belata ogo ngwaahịa.
Ọnọdụ ngwaahịa anyị abụrụla ngwaahịa kacha dị ọnụ ahịa. Anyị anaghị ere ngwaahịa dị ọnụ ala, anyị anaghịkwa emepụta ngwaahịa nwere ọnụ ahịa dị elu. Ngwaahịa anyị bụ ndị kacha ibu n'ahịa ma nwee ezi uche na ọnụahịa.
Anyị ga-azụta akụrụngwa dị mma nke ọma iji zere ọtụtụ nsogbu ire ahịa. Anyị ga -anwa ike anyị niile iji mee ka ndị ahịa anyị nweta ezigbo uru ma mee nkwado siri ike ha.
N'oge ezumike ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi anyị ga na -arụ ọrụ oge niile ma na -ejere ndị ahịa ozi 24 awa n'ụbọchị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọọ ma ọ bụ zitere anyị ozi ozugbo, anyị ga -azakwa gị ozugbo enwere ike.
Anyị nwekwara ike ịtụle nkọwa nke usoro wee kpebie usoro ikpeazụ n'oge ezumike ụlọ ọrụ, nke mere na mgbe ogbako ahụ malitere ịrụ ọrụ, anyị nwere ike hazie mmepụta nke iwu gị tupu oge eruo.
Oge nzipu: Jul-09-2020